Dubsmash -- नेपलिहरू बिच पपुलर्
Topic: Dubsmash -- नेपलिहरू बिच पपुलर्
Author Topic: Dubsmash -- नेपलिहरू बिच पपुलर् (Read 1179 times)
« on: June 24, 2015, 12:28:05 AM »
‘यो के हो मायाजस्तै, अझ मन बरालिँदै..’
नायिका प्रियंका कार्की अभिनीत प्रदर्शनको क्रममा रहेको चलचित्र हाउ फन्नीको यो गीत उक्त चलचित्रमा अर्की नायिका केकी अधिकारीमाथि भिजुलाइज गरिएको छ । प्रियंकालाई यो गीत यति मन पर्छ कि उनले उक्त गीतलाई डब्सम्यास गरिन् र सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरिन् । भिडियोमा उनी बेडमा सुतेकी छिन् र आफंैले सेल्फी खिचेर अदा देखाउँदै गीतको मुखडामा अभिनय गरेकी छिन् । युट्युबमा म्गदकmबकज एचष्थबलपब प्बचष् टाइप गरेर सर्च गर्दा यो भिडियो फेला पर्छ । यो गीत मात्र होइन, प्रियंकाले हिन्दी चलचित्र कभी खुशी कभी गममा बलिउड नायिका करिना कपुरले बोलेको हिट डाइलग ‘तुम्हारा कोई हक नही बनता कि तुम इतनी खुबसुरत लगो, नो वे..’ लाई पनि आफ्नो स्टाइलमा डब्सम्यास गरेर भिडियो अपलोड गरेकी छिन् । डब्सम्यासको फिवर अर्थात् ज्वरोले हाम्री प्रियंकालाई मात्र होइन, बलिउडकी प्रियंका अर्थात् प्रियंका चोपडालाई पनि गाँजिसकेको छ । उनले हालै प्रदर्शनमा आएको आफ्नो चलचित्र ‘दिल धडकने दो’ मा नायक रणवीर सिंहसँग बोलेको संवादलाई उनीसँगै साटेर डब्सम्यास गरेकी छिन् । चलचित्रको प्रचारमा उक्त डब्सम्यासको प्रयोग उनले निकै गरिन् ।
बलिउड, हलिउड र नेपालका सेलिब्रेटी मात्र होइनन्, संसारभरि एन्ड्रोइड वा एप्पल प्रयोगकर्ताहरूलाई अहिले डब्सम्यासले मनोरञ्जन प्रदान गरिरहेको छ । विशेष गरी भूकम्पका कारण त्रसित नेपाली युवाहरूलाई डब्सम्यासले आन्तरिक मनोरञ्जन प्रदान गर्दै त्रासबाट निस्कन मद्दत पुर्‍याइरहेको छ ।
के हो त डब्सम्यास ?
डबम्यास छोटो भिडियो बनाउने एप हो । यसलाई भिडियो सेल्फी पनि भन्न सकिन्छ । यो लञ्च भएको ६ महिना मात्र भयो । जर्मनीका तीन युवा जोनास ड्रपल, रोनाल्ड ग्रेन्क तथा डेनियल टासिकले यसको सिर्जना गरेका हुन् । गत वर्ष (२०१४) को नोभेम्बरमा लञ्च गरिएको यो एप यति छिट्टै लोकप्रिय भयो कि मात्र एकसातामा जर्मनीका प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई नम्बर वान एप बनाए । अहिले यसले विश्वभरीका १ सय ९० मुलुकका अधिकांश एन्ड्रोइड र एप्पल प्रयोगकर्ताहरूको प्याड र मोबाइलमा आफ्नो स्थान जमाएको छ । हाल यो आइट्युन्स र प्ले स्टोर दुवैमा नि:शुल्क उपलब्ध हुने एप्सको सूचीको टप टेनमा छ । यो एपका प्रयोगकर्ताहरू गुणात्मक रूपमा बढिरहेका छन् ।
हामी सबैलाई थाहा छ कि चलचित्रको पर्दामा गीत गाउँदा पाश्र्वगायकको आवाजमा आफुले लिप्सिङ गरेर नायक तथा नायिकाहरू अभिनय गर्छन् । डब्सम्यास त्यस्तो रमाइलो एप हो, जसमा संसारभरीका चलचित्रका चर्चित संवाद, संगीत, गीत आदि संग्रहित छ र आफूलाई मन परेको आवाज पनि त्यहाँ संग्रह गर्न सकिन्छ । समय कटाउन निकै उपयोगी मानिएको यो एपबाट पर्याप्त मनोरञ्जन प्राप्त हुन्छ ।
तपार्इंलाई गायक बन्न मन छ वा कलाकार ? अथवा चलचित्रमा प्रचलित कुनै ‘डाइलग’ आफैंले बोलेको छनक दिने विचार छ ? चलचित्रमा राजेश हमाल, दयाहाङ राई, आर्यन सिग्देल, बिपना थापा वा बलिउडका अमिताभ बच्चन, शाहरूख खान, सलमान खान, अमिर खान, सोनाक्षी सिन्हा, करिना कपुर आदिको स्वरमा आफैं बोलेको आभास दिने इच्छा छ भने यी सबै कार्य सार्वजनिक रूपमै प्रदर्शन गर्न डब्सम्यासले सहज बनाइदिएको छ । स्मार्टफोनमार्फत भिडियो खिचेर आफूलाई रहर लागेको कुनै संवाद वा गीतको तालमा हाउभाउ प्रस्तुत गरेर त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न सकिन्छ । अहिले यस्ता पोस्ट फेसबुक, ट्विटर तथा युट्युबमा छ्यासछ्यास्ती देखिन थालेका छन् । फेसबुक वा ट्विटरमा ३ (ह्यास) म्गदकmबकज टाइप गरेर सर्च गर्दा विभिन्न व्यक्तिहरूका डब्सम्यास भिडियोहरू उपलब्ध हुन्छन् जसलाई हेरेर मज्जाले समय कटाउन सकिन्छ । आफैंले भिडियो बनाउन भने आफूसँग स्मार्टफोट, ट्याबलेट वा प्याड हुनु जरुरी हुन्छ, जसमा यो एप डाउनलोड गर्नुपर्छ ।
नेपालमा समेत अहिले डब्सम्यासको प्रयोग बढ्दैछ । युट्युबमा डब्सम्यास नेपाल टाइप गरेर हेर्दा यस्ता अनेकन भिडियो देखिन थालेका छन् । त्यसमा छोटा र रमाइला भिडियोहरू हेर्न सकिन्छ । फेसबुकमा समेत डब्सम्यास नेपाल एकाउन्ट बनिसकेको छ । त्यसमा विभिन्न व्यक्तिले आफ्ना डब्सम्यास भिडियोहरू राखेका छन् । फुर्सदमा बनाइएका त्यस्ता भिडियो रोचक पनि हुन्छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा डब्सम्यास एउटा नयाँ शब्द बनेर आएको छ । अबको केही समयमै यसले नेपालमा समेत लोकप्रियता प्राप्त गर्ने अनुमान छ । धेरैमा १० सेकेन्डका यस्ता भिडियोलाई सबैतिर फैलाउन इस्ट्रग्राम, फेसबुक, ट्विटर, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जाल त छँदैछन् । बजारमा आएको छोटो समयमै यो एप्सले संसारभर आफ्नो प्रभाव देखाउन थालेको छ । भारतका सोनाक्षी सिन्हा र सलमान खानदेखि विश्वका केभिन हार्ट, एस्ले बेन्जो जस्ता कलाकारले समेत यसको प्रयोग गरिसकेका छन् ।
डब्सम्यासले कुनै गीत, चलचित्रको डायलग वा जिंगलको कुनै साउन्ड छनोट गर्ने सुविधा दिन्छ । ती साउन्डसँग मिल्ने गरी ओठ चलाएर वा विभिन्न हाउभाउका साथ आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यसमा सेल्फी भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ । अर्को अर्थमा यसलाई डबिङ गरेको भन्न मिल्छ । त्यसैले आफूलाई रुचि लाग्ने साउन्ड छनोट गरी रेकर्डपछि त्यसलाई सेयर गर्न सकिन्छ । अनि भएन त रमाइलो ? रोचक कुरा के छ भने त्यसरी बनाइएको भिडियो स्वचालित रूपमा अपलोड हुँदैन । त्यसलाई आफूमै सीमित राख्ने वा सेयर गर्ने भन्ने अप्सन पनि हुन्छ ।
यो एप्स खासगरी फुर्सदको सदुपयोग गर्न निकै उपयोगी छ । यसमा आफूलाई रुचि लाग्ने साउन्ड छनोट गरी टाइम पास गर्न सकिन्छ । ती साउन्ड एप्सबाटै सर्च गर्न वा आफैंले थप्न पनि सकिन्छ । साउन्ड थप्न तीनवटा अप्सन उपलब्ध छन् । यसमा आफैंले रेकर्ड गरेर राख्न, आइट्युन्सबाट झिक्न तथा आफ्नै स्मार्टफोनमा भएको साउन्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसपछि साथीभाइहरूलाई ट्याग गर्दा पछि फेरि त्यही साउन्ड खोज्न सहज हुन्छ ।
( एकराज सुवेदी र भीषण राईको सहयोगमा )
‘त्यही ल्याउनुपर्छ त, खुट्टा भए जुत्ता पाइँदैन ?’
‘मन परेको जुत्ता पो जुत्ता, नत्र खाली खुट्टै ठीक छ ।’
चलचित्र कबड्डीको यो संवादलाई हङकङमा बस्दै आएका मज्जाको राई खिम्दुङले डबम्यास गरेर फेसबुकमा सेयर गरेका छन्् । उक्त भिडियो म्यासेजमा उनले दुवै भूमिका आफैंले निर्वाह गरेका छन् । उनको यो डबम्यासमा हजारौंले लाइक, कमेन्ट र सेयर गरेका छन् । अहिले खिम्दुङ दैनिक एउटा डबम्यास अपलोड गरिरहेका छन् । किन त ? राई भन्छन्, ‘रमाइलो लाग्छ, आफ्नो कला पनि देखाउन पाइन्छ ।’
हालसालै पूर्व मिस नेपाल मलिना जोशीले पनि एउटा रमाइलो डब्सम्यास आफ्नो फेसबुक पेजमा सेयर गरेकी छिन् । मलिनाको मात्र होइन, अहिले यस्ता डबम्यासहरू सामाजिक साइटहरूमा थुप्रै देख्न पाइन्छन्, जुन रमाइलो पाराका हुन्छन् । विशेषत: फेसबुकमा यस्ता डब्सम्यास भिडियोहरू निकै लोकप्रिय छन् ।
नायिका तथा मोडल वर्षा राउतले नायिका करिना कपुरको डाइलगलाई डब्सम्यास गरेर फेसबुकमा अपलोड गरिन् । उनको पेजमा मात्र उक्त भिडियो १० हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ भने एक साताअघि युट्युबमा अपलोड भएको नायिका प्रियंका कार्कीको डब्सम्यास ५ हजार १ सय ६८ पटक हेरिइसकिएको छ ।
डब्सम्यासमा ३१ हजारको च्यालेञ्ज
हलिउडको चलचित्र फास्ट एन्ड द फ्युरियस सेभेनका लागि पहिलो पटक डब्सम्यास एप प्रयोग गरी डब्सम्यास च्यालेन्ज सञ्चालन गरियो । प्रचार–प्रसारमा उक्त च्यालेन्ज अर्थात् प्रतियोगिता निकै उपयोगी भयो । बलिउडमा भने गत साता प्रदर्शित चलचित्र ‘दिल धडकने दो’का कलाकारहरूले उक्त चलचित्रका सम्बाद बोलेर डब्सम्यास गरेका थिए, जसले निकै चर्चा पायो ।
नेपालमा भने डब्सम्यासलाई प्रचारमा प्रयोग गर्ने चलन भर्खरै प्रारम्भ भएको छ । चलचित्र ‘अधकट्टी’ले उक्त चलचित्रको चर्चित गीत ‘तिम्रो फिगर कोकाकोला’लाई डब्सम्यास च्यालेञ्जमा समावेश गरेको छ । सन्बी डिजिटल स्टुडियोले ‘अधकट्टी सन्बी डब्सम्यास च्यालेञ्ज’ शीर्षकमा फेसबुक पेज बनाएर उक्त प्रतिस्पर्धा गराइरहेको छ । उक्त गीतमा मनमोहक र रमाइलो डब्सम्यास बनाएर अपलोड गर्नेमध्ये सर्वोत्कृष्ट छनौट गरी चलचित्र निर्माण संस्थाले रु. ३१ हजार पुरस्कार दिने भएको छ । भविष्यमा डिजिटल प्रचारका लागि डब्सम्यास निकै उपयोगी हुने अनुमान छ ।
भाइनका युजरहरू नेपालमा खासै नभए पनि यसले विश्वजगत्मा भने राम्रै लोकप्रियता पाएको छ । एकप्रकारले नाम भाइन भए पनि यसलाई डब्सम्यासको दाइभन्दा पनि हुन्छ । ट्विटरमार्फत केही भिडियो अपलोड भएपछि २०१२ मा यो भिडियो सेयरिङ सिस्टम प्रचारमा आयो । भाइन पनि स्मार्टफोन तथा ट्याबहरूमा डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सकिने एप हो । यसलाई २०१४ को जनवरीमा अफिसियली लञ्च गरिएको थियो । भिडियो बनाउँदै सेयर गर्न पाइने यो एप त्यसपछि निकै चर्चामा रह्यो । भाइनमा अश्लिलता बढ्नुका साथै बालबालिकाहरूमा पनि यसको लोकप्रियता बढेपछि यसको किड्स भर्सन पनि आयो, जसमा बालबालिकाहरूले भाइन भिडियो बनाएर अपलोड गर्न सक्छन् ।
भाइन मात्र ६ सेकेन्डको हुन्छ । त्यो अवधिमा आफूले सिर्जना गरेर भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । चलचित्रको छायांकन गरेकै शैलीमा कटिङ गरेर अर्थात् सम्पादन गरेर भाइन भिडियो बनाउन सकिन्छ । नेपालमा भाइनको प्रयोग उतिसाह्रो नभए पनि यसले स्मार्टफोन तथा ट्याबका प्रयोगकर्ता केही युवामा भने प्रभाव पारिसकेको छ ।
Re: Dubsmash -- नेपलिहरू बिच पपुलर्
« Reply #1 on: June 24, 2015, 12:28:59 AM »
« Reply #2 on: June 24, 2015, 01:49:14 PM »
some majjako video haru chha hai dubsmash ko youtube ko link haru
« Reply #3 on: June 26, 2015, 04:56:16 PM »
tyo Hindi Nepali mix chhai ali unique laagyo.
« Reply #4 on: June 27, 2015, 12:43:11 PM »
Quote from: jimmas on June 26, 2015, 04:56:16 PM
Paresh Rawal by Prakriti Shrestha
« Reply #5 on: June 28, 2015, 08:59:14 AM »
यो पूजना प्रधान को ..
« Reply #6 on: June 29, 2015, 07:31:33 AM »
Actress Swastika Rajbhandari
« Reply #7 on: July 02, 2015, 03:19:08 AM »
Malina Shrestha Dubsmash
« Reply #8 on: July 11, 2015, 02:08:12 PM »
Sushma Karki -- 2nd compilation
(better than the first)
« Reply #9 on: July 17, 2015, 12:05:03 PM »